Dagaalka Ruushka ee Ukraine 20 June: Moskow oo xoojineysa Weerarada ka dhanka ah Ukraine
HomeWararka CaalamkaDagaalka Ruushka ee Ukraine 20 June: Moskow oo xoojineysa Weerarada ka dhanka ah Ukraine
June 20, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Warka ugu akhriska badan 0
kusoo dhawaada qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee la xidhiidha dagaalkii Ukraine Juun 20.
* Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyj ayaa rajaynaya in Ruushka uu xoojinayo weerarada ka dhanka ah dalkaasi. Zelensky wuxuu dhigayaa malo ah macnaha guud ee soo jeedinta Komishanka Yurub ee ah in Ukraine laga dhigo waddan musharrax ah. Toddobaadkan, 27-ka waddan ee xubnaha ka ah Midowga Yurub ayaa u codayn doona soo jeedinta.
* Golaha Qaranka ee Ukraine wuxuu ansixiyay laba sharci oo xaddidaya buugaagta Ruushka iyo muusikada. Sharciyadu waa inuu saxeexaa madaxweyne Volodymyr Zelensky ka hor inta aanay dhaqan gelin.
* Ukraine waxay uga mahadcelinaysaa Australia inay u soo dirtay afar markab oo nooca gaashaaman ah dalka ay dagaalladu aafeeyeen. Waxay qayb ka yihiin xirmo ka kooban 14 baabuur oo noocaan ah oo Ukraine ay heli doonto.
* Ukraine ayaa qaaday weeraro rogaal celis ah oo ka dhan ah ciidamada Ruushka ee ku sugan gobolka Zaporizhia, sida lagu sheegay falanqeyntii ugu dambeysay ee Machadka Daraasaadka Dagaalka (ISW).